पर्वतमा स्थानीय तहको निर्वाचन विश्लेषण सुरु : कुन कुन पार्टीबाट को-को लड्लान ? – ebaglung.com
२०७३ चैत्र १५, मंगलवार ११:२५	Top News, थप समाचार
महेन्द्र केसी पर्वत २०७३ चैत १५ । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पर्वतमा नगरप्रमुख उपप्रमुख तथा गाउपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षमा कुन पार्टीबाट को उठछन भन्ने चर्चा शुरु भएको छ ।
सदरमुकाम रहेको कुस्मा नगरपालिको प्रमुखमा नेपाली काँग्रसबाट उमेदवार हुन इच्छुकहरुको लिष्ट लामै छ । एमालेभित्र पनि नगरप्रमुखका आकांक्षीहरुको फेहरिस्त लामै छ । उता माओवादी केन्द्रभित्र पनि उमेदवारहरु लाईनमा छन् ।
कुस्मा नगरपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेसमा रामचन्द्र जोशी, डा. चुणामणी शर्मा, विव्दान गुरुङ, गंगाधर पौडेल, बसन्त बहादुर सिके, राम शर्मा पौडेलको नाम चर्चामा छ भने एमालेबाट जिल्ला अध्यक्ष पदम गिरी, मेघनाथ सुवेदी, शान्त पौडेल, गोबिन्द पहाडी प्रमुख पदमा दाबेदारी प्रकट गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्र भित्र नगर प्रमुखको लागी मनरुपा सुवेदी, शंकर गिरी, ढाकाराम शर्मादिको नाम चर्चामा आएको छ । राप्रपा भित्र प्र्रकाश पौडेल, ठाकुर बम मल्ल, मानकुमारी गिरी, अकोश गुरुङ, सुदिप पौडेल आदि आकांक्षी देखिएका छन् । नयाँ शक्ति पार्टीले मिनराज केसी अविरल, सिर्जनशिल कुवँर, राजबाबु पिसी मध्ये एकजनालाई उम्मेदवार बनाउने चर्चा छ ।
त्यस्तै फलेवास नगरपालिकामा नेकाबाट गंगाधर तिवारी, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, थमनसिंङ थापा, महिलामा रेखा गुरुङ, राधा कुमारी क्षत्री उम्मेदवारका आकांक्षीका रुपमा देखिएका छन् भने नेकपा एमालेका तर्फबाट पदपाणी शर्मा, मोतीप्रसाद पौडेल, देवेन्द्र पाण्डे आकांक्षी देखिएका छन् ।
माओवादी केन्द्रबाट प्रेम राना, कमल भुषालको नाम चर्चामा छ । त्यस्तै क्षेत्र नं १ अन्तरगत मोदी गाउँपालिकामा नेकाबाट पार्टी सविच विश्वप्रकाश प्रसाई, जीवन प्रसाइ, बलभद्र शर्मा, मधु चापागाई, मिना केसीको चर्चा भएको छ । भने एमालेको तर्फबाटी पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका भक्त कुवँर, प्रेम कुमार लामिछाने, प्रेम पौडेल आकांक्षी देखिएका छन् । माओवादी केन्द्रबाट मनोहरी तिमिल्सीना, मनबहादुर पौडेल क्षेत्री, गंगाा तिमिल्सिना, कृष्ण विक, चिजकाजी गुरुङको नाम चर्चामा छ ।
जलजला गाउँपालिकामा काँग्रेसको तर्फबाट कृष्ण केसी, चन्द्रबहादुर जिसी, दुर्गा बहादुर खत्री,राजु आचार्यको नाम चर्चामा छ भने एमालेबाट लालबहादुर अधिकारी, उदय सुवेदी छन् । माओवादी केन्द्रबाट दिपक आचार्य, बाबुराम कार्की लगायतको नाम चर्चामा आएको छ ।
क्षेत्र नं २ अन्तरगतको विहादी गाउँपालिकामा नेकाबाट आनन्द भुषाल, तिलक कुवँर, गोविन्द पराजुली चर्चामा रहेका छन् । नेकपा एमालेबाट कमल भुषाल, लालबहादुर गुरुङ, रामप्रसाद पराजुली चर्चामा देखिएका छन् भने माओवादी केन्द्रको तर्फबाट कृष्ण पराजुली, सविन गुरुङ,ऋषिराम भुषालको नाम चर्चामा छ । महाशिला गाउँपालिकामा नेकाको तर्फबाट अशोक उचाइ ठकुरी,मोहन गुरुङ,उज्वल गुरुङ सम्भावित उम्मेदवारका रुपमा हेरिएका छन् ।
त्यस्तै एमालेको तर्फबाट राजु पौडेल, जीवन उचाई ठकुरी, पुष्प पौडेल लगायतको सम्भावना देखिएको छ । माओवादी केन्द्रबाट भने विवश गुरुङ, पदमबहादुर क्षेत्री चर्चामा छन् । पैयूँ गाउँपालिका अन्तरगत नेकाबाट खगेन्द्र तिवारी, राजेन्द्र तिवारी, एकनारायण न्यौपानेको नाम बाहिर आएको छ । एमालेमा मित्रलाल बस्याल, चोकलाल न्यौपाने लगायतका छन् । माओवादी केन्द्रबाट जयनारायण तिवारी, पुण्य आचार्यलाई सम्भावित उम्मेदवारका रुपमा हेरिएको छ ।